Wasiirka Arimaha dibada dalkan Sweden haweeneydii ugu aheyd Anna Lindh ayaa saakay aroornimadii waxaa ay ku geeriyootay cisbitaalka Karolinsk Hospital ee magaalada Stockholm ee xarunta dalkan Sweden kadib markii ay u dhimatay dhaawaaciii kasoo gaaray mindidii shalay galab abaarihii afartii iyo barka xilliga Sweden nin caloosha ka geliyey iyadoo ka adeeganeysa dukaan kamid ah dukaamanka ugu caansan ee ku yaala magaalada.
"Aad ayaan ugu xumahay inaan maqlo warkan naxdinta leh in ay Anna Lindh u dhimato dhaawicii soo gaaray shalay" ayuu yiri Göran Person oo ah ra'iisal wasaaraha dalkan Sweden oo ay wejigiisa kamuuqatay naxdin iyo muraal dilaac isagoo saakay shir jaraa'id oo deg deg ah qabtay.
"Anna waxey ka tagtay aabe iyo hooyo, shacab iyo xisibgii Social-demokrat-ka oo u aheyd xidig caalami ah, caalamkana waxaa ka baxay haweeney magac ku leh saaxada siyaasadeed" ayuu misna sii daba dhigay hadalkiisa isagoo aad u tiiraanyeysan kana wel welsan mustaqbalka madow ee soo wajahay taariikhda siyaasadeed ee dalkan.
Waxaana hadaladii sii mar walba kamid ahaa inta uu shirka jaraa'id ku jiray "Anna kama aysan tegin Social demokrat-ka ee waxaa ay ka tagtay dadka reer Sweden oo ay u aheyd furihii xiriirka caalamiga ah ee dalkeena"
Si kastaaba arintu ha ahaatee Anna Lindh oo aheyd wasiirkii arimaha Dibada Sweden waxaa ay kamid aheyd haweenka ugu magac dheer ee taariikhda siyaasada dalkan Sweden,waxaana ay wasiirka arimaha dibada aheyd tan iyo sanadkii 1998-dii markaasoo xisbiga talada dalka hayaaku guuleystay dooroshooyinka dalka dhacay.
Waxaana ay caan ku aheyd cod kornimo iyo iyadoon runta ka gaban caaladana aad ugu olaleyso, gaar ahaan Anna Lindh waxaa ay aad uga soo horjeeday siyaasada arimaha dibada dalka Mareykanka ee ku wajahan guud ahaan bariga dhexe iyo arimaha dalka Ciraaq iyadoo marar badan meel fagaari ah ka sheegtay in Mareykan xagal daacinayo arimaha bariga dhexe.
Isku soowada duuboo Anna Lindh waxaa ay u dhimatay dhaawac halis ah oo ka soogaaray mindidii caloosha shalay galab nin kaga dhiftay taasoo u sii dhaaftay beerka oo waxyeelo xoogan u geysatay dhaqaatiirtana ay wax ka qaban waayeen. Anna Lindh saakay oo khamiis ah markey saacadu aheyd
0:6:29 aroornimo ayey nafta kabaxday.
Ollalihii doorasha codbixinta ee qaadashada lacagta bahwadaagta midowga Yurubna dib ayaa loo dhigay ilaa amar danbe, maadama dalka guud ahaan ay murugo iyo siyaasad madow ku jirto.
FAALLO: [Faaladan waxaan qoray shalay galab kahor intii aan Anna Lindha geeriyoon]
Sweden oo siyaasad mugdi ah gashay kadib isku daygii dilkii Anna Lindh
[ Dhaawac taariikhda dib u xasuusiyey dilkii Ra’iisalwasaarihii hore]
Faaladii, Ikraam Cali-kaar
Dalkan Sweden waxuu kamid yahay dalal dhowr oo caan ku ah siyaasad qunyar socodnimo, dadka iyo dowlada Sweden waxaa lugu tiriyaa iney yihiin dad nabada jecel. Siyaasada Sweden inta la xasuusan yahay weligeed nabadda ayey sheegtaa iney la jirto, kolka ay timaadana artigda siyaasadeed ee dalkan waxaa iyana sheegtaan iney ku moqif yihiin dalalka ay bahwadaagta yihiin ee Midowga Yurub oo wixii dalalkaasi kale wadsa jir u soo saaran ay la qabto. Sidaa daraadaa dalkan guud ahaan dhinaca siyaasada waxaa dadka ka faalooda arimaha dublumaasiyada ku sheegaan dal degan oo aan nabad maahee aan colaad u qalab arruursan.
Si kastaaba arrintu ahaa waxaa maanta galinkii danbe saacadu markey aheyd 4-tii galabnimo xilliga Sweden, nin si ula kac ah caloosha mindi kaga hubsaday haweeneyda wasiirka arimaha dibada u ah dalkan Anna Lindh, oo markaasi ka iibsaneysay dhar dukaanka la yiraahdo NK oo ku yaala bartamaha magaalada Stockholm ee xarunta dalkan. Dhaawicii cuslaa ee Anna ka soo gaaray mindidaasi caloosha laga geliyey waxaa uu keenay qaliin saacado badan qaatay iyadoo dhaawaca noqdu mid beerka wax u dhimay sida ay sheegayaan wararka iska soo daba dhacaya ee ku saaban haweeneydaasi.
Inkastoo arrintani tahay mid saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan siyaasada dalkan ee awalba ullaha booca ku tukubeysay ayey dhalisay su’aal aan weli jawaabteeda lahelin taasoo ah ”Yaa dhaawacay Anna Lindh, maxaase laga rabaa yeyse danbi ka gashay??. Dhab ahaan dadka odorasa siyaasada dalkan siyaalo kala duwan ayey durba ku sheegeen arintaasi. Waxaana in badan oo iyaga kamid ahi aaminsan yihiin in iskudayga dilka ahaa ee Anna Lindh salka ku heyso sida ay ugu ollaleeysay in dalkan kamid mid noqdo dalalka bahwadaagta ah ee ay ka dhaxeyso lacagta Euro-da loo yaqaan. Taasina ay si weyn ugu careysiisay dadka iyagu kasoo horjeeda in Sweden qaadato lacagta Euro-da, markaana ay dhici karto in shaqsi si weyn u dhibsaday iidhehyada faraha badan ee haweeneydaaasi sameysay uu isku dayey inuu dilo ama dad arintaasi ku lugu leh ka danbeeyaan.
Qolo kale oo siyaaasada rog rogta ayaa iyagana qaba mid taas ka duwan, waxaana ay leeyihiin ”maadama Anna Lindh ay aheyd haweeney aan ku qanacsaneyn qaabka ay u shaqeyso siyaasada arimaha dibada ee Mareykanka dhowr jeerna ay sheegtay in Mareykan aanu dhex dhexaad ka aheyn arimaha bariga dheh, shaqsiyana ay joojineyso cunista qudrada laga keeno dalka Israa’iil haddii aysan Israa’iil aysan dhowrin xauuqda dadka falastiiniyiinta, islamarkaasina si weyn uga soo horjeeday dagaalkii ka dhanka ahaa dalka Ciraaq” in arintaasi saameyn ku yeelan karrto.
Qolo kale aanba aaminsaneyn in iskudaygii Anna Lindh ee galabta salka ku heyn karto arimo diin ayaa iygauna waxey leeyihiin ” waxaa dhici karta iney ku lug lahaan karaan qolo si weyn ugu carootay sanadii 2001-da qaraxyadii daarihii dhaa dheeraa ee Mareykanka kadib ay Anna Lindh oo muslimiinta u muujineysa dabacsnaan ku amartay wasaaradeedii arimaha dibada iney daabacdo buug si weyn uga hadlaya diinta Islaamka taasoo ah ”diin xadaaradeed oo dadka nabada ugu baaqeysa” islamarkaasina loo qeybiyo iskoolada dalka iyo xaruumaha kale.”
Hadaba Anna Lindh waa haweenay ruug cadaa ah oo siyaasada in badan ku soo jirtay, islamarkaana ah haweeney fiiro dheer oo dhowrta argtiyada iyo xadaaraha kala duwan ee dunida ka jira, soona dhaweysa dhaqamada kala duwan. Waxaana ay shaqsi ahaan necebtahay dadka isku sheega siyaasiinta ku hadla hadalo aysan u fiirisan, dhowrj jeerna waxaa ay canaan u soo jeedisay ra’iisal wasaaraha dalka Talyaaniga Selvio Berluconi oo ah nin aan marnaba fiiro dheereyn oo wixii afkiisa karro hadlo, horeyna dhowr jeer islaamka u aflagaadeeyey isagoo ku sheegay diinta danbeysa.
Sanadkii ina dhaafayna waxey Anna Lindh midowga Yurub ka codsatay iney xirriirka u jaraan Israa’iil maadama ay gumaadeyso maatada dadka laga awood badan yahay ee Falastiin. Qadiyada Ciraaq iyo bariga dhexena waxaa ay aaminsan tahay in gollaha Amaanka ee Qaramadda midoobey oo kaashanaya beesha caalamku awood u leeyihiin iney wax ka qabtaan dalka Ciraaq iyo guu ahaan gobolkaasi haddii Marekan joojiyo awood sheegashada dheeraadka ah ee uu sheeganayo.
Sidaa daraadeed dalkan Swedena waxaa uu kamid yahay dalalka sida weyn ula leh xirriir caalami ah dunida muslinka, marar badana aan dheg jalaq u siin amaradii ka yimid aqalka Cad ee Mareykana ee amrayey in gebi ahaanba la xanibo dhaqaalaha kooxaha lugu sheego argagaxisada ee dalkan ka jira, gaar ahaan waxey Anna Lindh geed dheer u kortay sidii sadexdii dhalinyaro ee soomaalida Sweden ahaa looga saarilahaa liiska dadka Mareykanka ku sheegay argagaxisada ugu danbeyntiina ay arintaasi ku guuleysatay iney wax ka qabato.
Ugu danbeyntiina Anna Lindh oo ah haweeney miisaan culus oo siyaasadeed ku leh dalkan ayaa dhaawacii ka soo gaaray dilkii isku dayga, ayaa waxey tahay tahay jug xoogan oo soo gaartay dalkan Sweden iyo siyaasadeeda qunyar socodka ah.
Waxaana dadka arimaha siyaasada dalkan u kuuragala aaminsan yihiin iney tahay qatar kale oo soo wajahday guud ahaan nabadgalayada qaar siyaasiinta dalkan, tanoo ka dhigtay midsay markale dib u xasuusi dilkii habeenimo loo geystay ra’iisal wasaarihii dalkan Olf Palm oo lugu dilay bartamaha caasimada Sweden muddo haatan laga joogo 16 sanno. Lamana garanayo sida ay u wajihi laheyd xukuumada Göran Person arintani oo dib u dhac weyn ku keeni karta u diyaar garowga ay dowlada Sweden ugu jirto u codeynta qaadashada lacagta Euro-da oo maalinta axada ee fooda innugu soo heysa loogu dareerayo codbixinteeda.
QORAALADII HORFE EE IKRAAM